“Uma maleenayo nafteyda inaan ahay kan ugu fiican”… Lionel Messi – Gool FM
“Uma maleenayo nafteyda inaan ahay kan ugu fiican”… Lionel Messi
(Barcelona) 04 Juunyo 2018. Mucjisada xulka qaanka Argantina iyo kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa aaminsan inuusan ahayn xidiga ugu fiican aduunka.
Dhinaca kale Lionel Messi ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in diyaar garowga wanaagsan uu xulka qaranka Argantina ay u ogolaaneyso in koobka aduunka ay kaga soo muuqdaan sida ugu fiican.
Mesiis ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay: “Uma maleenayo nafteyda inaan ahay kan ugu fiican, kaliya waxaan u arkaa inaan ahay kaliya xidig ku sareeya waxyaabaha qaar, kaliya waxaan waxaan isku dayaa sida aan nafteyda kaga sara mari lahaa, xili kasta sidaas ayaan ahaa”.
“Waxaan xasuustaa marka aan imaanayay kooxda Barcelona, waxaan arkay in caqabadaha dhaqanka aysan ahayn mid weyn, Barcelona waa magaalo si wanaagsan u soo dhaweyneysa dadka martida ah ee banaanka ka imaanaya, waxay soo dhaweysaa kumanaan kun booqashoyaal ah”.
kabtanka xulka qaranka Argantina ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay diyaargarowga ay ugu jiraan koobka aduunka wuxuuna yiri: “Waxaa muhiim ah in si fiican loo shaqeeyo xiliga isdiyaarinta, sababtoo ah ma jiraan waqti badan aan ku diyaar garowi karno”.
Muxuu ka yiri Michael Ballack go’aankii uu Joachim Low kaga saaray Leroy Sané liiska xulka qaranka Germany ee koobka aduunka 2018?